Ingxelo Yentlanganiso Yonyaka Ka-2013 | AmaNgqina KaYehova
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiArmenia (saseNtshona) IsiBhulu IsiChichewa IsiChol IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMam IsiNahuatl (saseCentral) IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTankarana IsiTarascan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUzbek IsiValencian IsiVezo IsiXhosa IsiZulu
Ingxelo Yentlanganiso Yonyaka
Ngempelaveki kaOktobha 5 no-6, 2013, abantu abayi-1 413 676 abasuka kumazwe ayi-31 baya kwintlanganiso yonyaka ye-129 yeWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania kwiHolo yeNdibano yamaNgqina kaYehova eseJersey City, eNew Jersey, eMerika, ukanti abanye babo babeyibukele ngeIntanethi.
UGuy Pierce, ilungu leQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova, wayengusihlalo wale ntlanganiso. Wavuselela umdla wababekho ngokubaqinisekisa ukuba ucwangciso lwaluza kuphendula imibuzo ebalulekileyo yeBhayibhile, luyenze icace inyaniso luze lunike ‘ukutya kokomoya ngexesha elifanelekileyo.’—Mateyu 24:45; IMizekeliso 4:18.
“Umboniso Ozukisa UYehova.”
UMark Sanderson, ilungu leQumrhu Elilawulayo, wathetha ngeenkcukacha zomboniso omtsha okwikomkhulu lamaNgqina eBrooklyn, eNew York, eMerika, onomxholo othi “IBhayibhile Negama LikaThixo.” Lo mboniso ubalaselisa iindawo ekuqinisekiweyo ukuba likho kuzo igama likaThixo kwiZibhalo zesiHebhere neZibhalo zamaKristu zesiGrike yaye uquka neeBhayibhile ezininzi ezindala, izinto zakudala ezenziwe ngokutsha namaphepha eBhayibhile angonyaka ophakathi kuka-500 no-1500.
Izinto ezikulo mboniso ziquka amaphepha enguqulelo yeBhayibhile yenkulungwane ye-16 kaWilliam Tyndale, owayengumguquleli wokuqala weBhayibhile owasebenzisa igama likaThixo ngesiNgesi nephepha elisuka kwinguqulelo yeSpanish yango-1602 eyaziwa ngokuba yiReina-Valera Bible nayo elisebenzisa izihlandlo ezininzi igama likaThixo elingu-“Iehova.” Kukwakho nohlelo lwesiNgesi olwaziwa ngokuba yiGreat Bible (eyaprintwa ngo-1549), ikopi kaElias Hutter eneelwimi eziyi-12 (Uhlelo luka-1599, olukwabizwa ngokuba yiNuremberg Polyglot) neGeneva Bible (eprintwe ngo-1603), zonke ezinegama likaThixo.
UMzalwan’ uSanderson wamema wonke umntu ukuba aye kubona lo mboniso weBhayibhile, esithi: “Sithandazela ukuba . . . uza kunceda abantu abanyanisekileyo abakubudala obahlukahlukeneyo, enoba banemfundo engakanani na ukuba bathande izinto ezimbini esizithandayo sonke—iLizwi likaThixo elixabisekileyo, iBhayibhile negama lakhe elizukileyo uYehova.”
Umxholo Wonyaka Ka-2014.
Emva kokuba uGerrit Lösch weQumrhu Elilawulayo eshwankathele iMboniselo yaloo veki, uMzalwan’ uPierce wenza isaziso somxholo wonyaka ka-2014 othi, “Mabufike ubukumkani bakho.” (Mateyu 6:10) Ekubeni lo ingumxholo wonyaka onokusoloko ufaneleka kumaNgqina kaYehova, ufaneleka ngakumbi kulo nyaka ekubeni ngo-2014 iyiminyaka eyi-100 kwamiselwa uBukumkani ezulwini.
“Isipho Esixabisekileyo Esivela KuYehova.”
Kule nxalenye, abaphulaphuli babukela ividiyo ethetha ngembali yeNguqulelo Yehlabathi Elitsha, iBhayibhile epapashwa ngamaNgqina kaYehova ibe abanye abantu bathi iphakathi kweenguqulelo eziguqulelwe kakuhle. Xa uNathan Knorr wakhulula umqulu wokuqala wale nguqulelo kwiNdibano Yezizwe Ngezizwe Yolwando Lolawulo Lobuthixo ngo-1950, wanika abaphulaphuli icebiso elisasebenzayo nanamhl’ oku elithi: Yifundeni kakuhle yonke le nguqulelo. Ncedani nabanye bayifunde, kuba oko kuza kubanceda babize egameni likaYehova.
USamuel Herd weQumrhu Elilawulayo wanikela intetho yale nxalenye, eyayiquka udliwano-ndlebe olwalurekhodwe kwangaphambili lwamalungu amane aseBheteli yaseMerika nawayekho xa iNguqulelo Yehlabathi Elitsha yokuqala yayikhululwa iyimiqulu emithandathu eyahlukahlukeneyo phakathi ko-1950 no-1960.
UEunice Timm ukhumbula xa wayesebenzisa iNguqulelo Yehlabathi Elitsha kwiintlanganiso zamaKristu. Wayezithanda iimbekiselo zale nguqulelo eziluncedo ekuphandeni. Ekubeni kwakuba nzima ukuphatha yonke loo miqulu, wayethatha kuphela imiqulu aza kuyidinga kuquka neKing James Version encinane esenzela ukuba kufundwe iivesi ebengalindelanga ukuba ziza kufundwa.
Kwakhona le nguqulelo intsha yachaphazela ezinye iinkalo zonqulo lwethu. Ngokomzekelo, ebalisa uFred Rusk wathi, ngaphambi ko-1950, abo babethandaza eBheteli babesebenzisa amabinzana akudala akwiKing James Version njengelithi, “thy kingdom come.” Noko ke, emva nje kokuba kukhululwe iNguqulelo Yehlabathi Elitsha bayeka ukusebenzisa ulwimi lwakudala kunoko bathetha ngendlela eqhelekileyo.
UJohn Wischuk akazange athande kuphela indlela eguqulelwe ngayo kodwa nokuthobeka kweKomiti yeBhayibhile yeNguqulelo Yehlabathi Elitsha. Wathi: “Yayingafuni ukwaziwa isaphila okanye kwanaxa yayisele ifile, kuba yayifuna lonke uzuko luye kuYehova uThixo.” UCharles Molohan wachaza indlela ababevakalelwa ngayo xa bebonke xa wathi: “INguqulelo Yehlabathi Elitsha isincede saqiniseka ngenyaniso ezintliziyweni zethu yaye isincede saqinisa ukholo lwethu ukuze sikwazi ukuya kunceda abanye abantu babe nokholo.”
“Sibeva Bezithetha Ngeelwimi Zethu Izinto Zobungangamela ZikaThixo.”
(IZenzo 2:11) UGeoffrey Jackson weQumrhu Elilawulayo wanikela intetho ekwakhululwa kuyo uhlelo oluhlaziyiweyo luka-2013 lweNguqulelo Yehlabathi Elitsha. Ekupheleni kwale ntetho, abo babekho kuquka phantse bonke abo babebukele ngeintanethi, bafumana ikopi yale Bhayibhile.
UMzalwan’ uJackson waphawula ukuba sele kudlule iminyaka engaphezu kweyi-60 wakhululwayo umqulu wokuqala weNguqulelo Yehlabathi Elitsha. Ngalo lonke elo xesha ulwimi lwesiNgesi luye lwatshintsha, kodwa injongo yokuguqulela kwethu iBhayibhile ayikatshintshi. Sifuna ukuguqulela iLizwi likaThixo ngendlela echanileyo ngaphandle kokutshintsha oko likuthethayo.
Ngo-2005, iQumrhu Elilawulayo laye lagxininisa ekuguqulelweni kweBhayibhile ngeelwimi ezininzi. Ukususela ngoko, inani leelwimi epapashwa ngazo iNguqulelo Yehlabathi Elitsha liye landa ukusuka kweziyi-52 ukuya kutsho kweziyi-121, yaye kukho eziyi-45 ezingakumbi ezilungiselelwa ukupapashwa. Njengoko abaguquleli beguqulela iNguqulelo Yehlabathi Elitsha ngezinye iilwimi, baye bacela ukucaciselwa amagama namabinzana athile. Ukuza kuthi ga ngoku, kuye kwabuzwa kwaza kwaphendulwa imibuzo enjalo engaphezu kwe-52 000 yaye oko kuye kwabonisa ukuba ziziphi indawo kwisiNgesi ezinokuhlaziywa.
Ngokomzekelo, uMzalwan’ uJackson wacacisa ukuba iiBhayibhile zangaphambili zesiNgesi zeNguqulelo Yehlabathi Elitsha bezisithi ku-1 Samuweli 14:11, uYonatan nomthwali wezixhobo zakhe ‘baziveza kumaFilisti.’ EsiNgesini eli gama lithi ‘ukuziveza’ lithetha izinto ezahlukeneyo, ngoko ukuze kungabhidani zikomityi kuye kweziwa utshintsho kweli gama eBhayibhileni entsha kwaza kwathiwa ‘baphuma apho babezifihle khona.’ Ngokufanayo, uMika 2:6 ebesithi: “Musani ukuphosa mazwi. Baphosa amazwi.” Le vesi ngoku ithi: “Bashumayela besithi, ‘Musani ukushumayela!’”
Kwiminyaka emihlanu edlulileyo, iQumrhu Elilawulayo liye lamisela ikomiti yokuhlaziya iNguqulelo Yehlabathi Elitsha, yaye ngoku imiphumo yomsebenzi wabo iyafumaneka. Le Bhayibhile ihlaziyiweyo iyabukeka, ifundeka lula yaye yomelele ngokwaneleyo ukuba ihlale ibukeka nokuba sele kukudala isetyenziswa. UMzalwan’ uJackson wenza isaziso sokuba uhlelo olunamagama amakhulu nezincinane zesiNgesi ziza kufumaneka kungekudala.
‘Ukuliphatha Ngokufanelekileyo Ilizwi Lenyaniso.’
UStephen Lett weQumrhu Elilawulayo wathetha ngezinto ezongezelekileyo ezikhoyo kule Bhayibhile ihlaziyiweyo, intetho yakhe eyisekele ku-2 Timoti 2:15. Ibinzana elithi ‘ukuliphatha ngokufanelekileyo’ elisetyenziswe kule vesi lithetha “ukusika kakuhle.” Sifuna ukusebenzisa ‘ikrele lomoya’ kakuhle, lichane. (Efese 6:17) UMzalwan’ uLett uye wabonisa indlela amaphepha ongezelelekileyo ale Bhayibhile anokusinceda ngayo sikwenze oko.
Ngaphambili, indawo ethi “An Introduction to God’s Word,” ineevesi zeBhayibhile eziphendula imibuzo eyi-20 ngeemfundiso zeBhayibhile.
IAppendix A, icacisa izinto ezithile zolu hlelo luhlaziyiweyo, njengendlela olwenziwe ngayo nokutshintsha kwamagama asetyenzisiweyo kunye nokubakho kwegama likaThixo.
IAppendix B, eneenxalenye eziyi-15 ezinemibalabala, ineemaphu nemifanekiso eza kuba luncedo kufundisiso lobuqu nokufundisa abanye.
Ekuqaleni kwencwadi yeBhayibhile nganye, indawo ethi “Outline of Contents,” ishwankathela loo ncwadi yeBhayibhile, incede umntu ofundayo akwazi ukuyifumana ngokukhawuleza indawo ayifunayo. Le nxalenye ithathel’ indawo ushwankathelo ebeliphezulu kwiphepha ngalinye kwiiBhayibhile zangaphambili.
I-“Glossary of Bible Terms” ikunika iingcaciso ezimfutshane zamagama amaninzi asetyenziswa eBhayibhileni.
“Isalathiso Samagama EBhayibhile” siye sancitshiswa ngendlela ephawulekayo. Ngoku sinamagama neevesi eziluncedo kakhulu ekushumayeleni nasekufundiseni.
Iimbekiselo eziphakathi kwephepha ngalinye nazo ziye zancitshiswa. Ngoku zineembekiselo eziya kuba luncedo entsimini kuphela.
Imibhalo engezantsi inezinye iindlela zokuchaza amagama, ukuguqulelwa kwegama ngalinye nemvelaphi yenkcazelo.
UJohn Ekrann, olilungu leKomiti yeSebe yaseUnited States, waye wabonisa iJW Library entsha efumaneka kwizixhobo ezifana neesmartphone neetablet. INguqulelo Yehlabathi Elitsha ehlaziyiweyo nezinye iinguqulelo ezintlanu zeBhayibhile ziyafumaneka kule JW Library. Yakhululwa ngo-Oktobha 7, 2013 ibe ifumaneka simahla.
“Ukuguqulela ILizwi LikaThixo Ngendlela Echanileyo.”
UAnthony Morris weQumrhu Elilawulayo wathetha ngemigaqo eye yakhokela iKomiti yeBhayibhile yeNguqulelo Yehlabathi Elitsha ngoxa ibilungiselela olu hlelo luhlaziyiweyo. Incedwa yeyoku-1 kwabaseKorinte 14:8, 9, le komiti ibifuna ukuqinisekisa ukuba uhlelo oluhlaziyiweyo kuya kuba lula ukulufunda. Le komiti yayikuphepha ukuguqulela igama negama kuba oko kuyenza isithakale intsingiselo yoko kuthethwa yiBhayibhile.
Ngokomzekelo, xa bekunokuguqulelwa igama ngalinye kwiGenesis 31:20 ibiya kuthi: “UYakobi waba intliziyo kaLabhan.” Noko ke, iqhalo lesiHebhere elisetyenzisiweyo linentsingiselo eyahlukileyo xa ulithelekisa nelesiNgesi, ngenxa yoko ngoku iNguqulelo Yehlabathi Elitsha ilichaza ngolu hlobo eli binzana: “uYakobi wamoyisa ngobuqili uLabhan.” Ngokufanayo, eyoku-1 kwabaseKorinte 7:39 ibinokuthi umfazi unokutshata enye indoda xa umyeni wakhe “enokulala.” Ekubeni ngamanye amaxesha iZibhalo zisebenzisa “ukulala” xa zithetha ngokufa, iNguqulelo Yehlabathi Elitsha ikwenza kucace oku ngokusebenzisa ibinzana elithi xa “ingalala ekufeni.”
UMzalwan’ uMorris wathi: “IBhayibhile yabhalwa ngolwimi lwabantu abaqhelekileyo—abalimi, abelusi nabalobi. IBhayibhile eguqulelwe kakuhle yenza umyalezo wayo uqondakale kubantu abanyanisekileyo, kungakhathaliseki ukuba bavela phi.”
“Ukusebenzisa ‘Amazwi Ayolisayo Namazwi Achanileyo Enyaniso.’ ”
UDavid Splane weQumrhu Elilawulayo wanikela intetho esekelwe kwiNtshumayeli 12:10. Ababhali beBhayibhile babelumkile xa bebhala iingcinga zikaThixo, yaye iKomiti yeBhayibhile yeNguqulelo Yehlabathi Elitsha yokuqala yenza ngokufanayo. Nalo ke uhlelo oluhlaziyiweyo lakutshanje lusalandela umgaqo ofanayo othi: ‘Bhala amazwi achanileyo enyaniso’ uze wenze umyalezo kaThixo ucace kangangoko kunokwenzeka.
UMzalwan’ uSplane wathi: “Amagama esiNgesi amaninzi aneentsingiselo ezahlukahlukeneyo.” Ngokomzekelo, iiNguqulelo Zehlabathi Elitsha ezingaphambi kweka-2013 zesiNgesi bezisebenzisa ibinzana elithi, “isizekelo samazwi aphilileyo” kweyesi-2 kaTimoti 1:13. Eli gama lithi “isizekelo” lithetha izinto ezahlukahlukeneyo, enye yazo “ngumfanekiso owenziwe kakuhle.” Ngokwendlela elichazwe ngayo eli gama, abanye baye bathi eli binzana lithetha ukuba iimfundiso zeBhayibhile zithandeka njengomfanekiso owenziwe kakuhle. Kodwa ke, eyona ndlela isondeleyo kulwimi lwamandulo yokuguqulela eli binzana ithi, ‘umzekelo esimele siwuxelise.’ Ngoko le Bhayibhile ihlaziyiweyo isebenzisa ibinzana elithi, ‘umzekelo wamazwi aphilileyo.’
UMzalwan’ uSplane wachaza nohlaziyo olwenziweyo ukuze lucace utshintsho oluye lwakho kulwimi lwesiNgesi. Ngokomzekelo, iiNguqulelo Zehlabathi Elitsha ezingaphambi kweka-2013 zesiNgesi bezisebenzisa ibinzana elithi ‘ukubethelela,’ xa zithetha ngokubulawa kukaYesu. Ngendlela elisetyenziswe ngayo eli gama, abantu abaninzi baye babe nomfanekiso womntu ogqojozwe umzimba ngesibonda somthi. Ekubeni uYesu wayengagqojozwanga ngesibonda sentuthumbo, iBhayibhile ehlaziyiweyo isebenzisa ibinzana elithi, ‘wabethelelwa esibondeni,’ xa ichaza indlela uYesu awabulawa ngayo.—Mateyu 27:22, 23, 31.
UMzalwan uSplane waqukumbela ngokuthi: “Sithandazela ukuba ukuyifunda kwenu kakuhle iNguqulelo Yehlabathi Elitsha ehlaziyiweyo kuya kunisondeza—kuya kunisondeza ngakumbi—kuYehova. Ngamana angahlala enguBawo wenu, uThixo wenu noMhlobo wenu.”
UMzalwan’ uPierce waye wafanisa iBhayibhile entsha nesidlo esilungiselelwe nguYehova ‘esineoli eninzi.’ (Isaya 25:6) Waqukumbela ucwangciso ngendlela efanelekileyo ngokucela abaphulaphuli ukuba bacule ingoma 114 enomxholo othi “Incwadi KaThixo—Ixabisekile” kwiculo elithi Culela UYehova.
INguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele ehlaziyiweyo ka-2013 iyabukeka yaye yomelele.
Iimbalasane Zentlanganiso Yonyaka—Oktobha 2013